Af celiye laga howlgeliyey dukaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Rawa Thahad oo laga howl-geliyey dukaanka sidii ay ugu sahli lahayd qaxootigu iney adeegtaan. Sawirle: Inga Korsbäck/Sveriges Radio.
Af celiye laga howlgeliyey dukaan
La daabacay tisdag 3 november 2015 kl 16.15
Kolkii nawaaxiga Hässlö oo dhacda dibadda magaalada Västerås laga furay xero qaxooti ayey dukaammadii cunnada ee ku yaalay nawaaxigaa aad kor ugu kaceen macaamiishoodu, hase yeeshee aaney qaar badan oo ka mid ah macaamiisha cusubi ey dhibaato kala soo gudboonaatay luuqadda iswiidhishka oo aaney garaneyn iyo sidii ey isku fahmi lahaayeen shaqaalaha dukaanka.
Maamulka dukaanka ayaa iminka wuxuu howl-geliyay af-celiye ku hadla luuqadda iswiidhishka iyo sidii uu uga jawaabi lahaa su’aalaha ey qabaan macaamiisha aan ku hadal luuqadda iswiidhishka, sida uu sheegay maamulaha dukaanka Måns Hemmingsson.
- Hoowlahayaga ayaa salka ku haya adeeg iyo dhammaan macaamiisha la siiyo adeeg isku mid ah. Hase yeeshee uu wakhtigu noo saamixi waayey, iyadoona ay dhacday inay shaqaalaha rasmiga ah dhibaato wakhti kala kulmaan sidii ey howlahooda kale u fulin lahaayeen.
Bilowgii bishii oktoober ayay ahayd kolkii xero qaxooti oo loogu talo galay 600 oo ruux laga furey goob aan ka fogeeyn dukaanka ICA Maxi ee nawaaxiga Hälla oo dhacda dibadda magaalada Västerås.
Isl-markiiba wuxuu maamulihii dukaanka Måns Hemmingsson iyo shaqaalihii dukaankuba dareemeen in qaar badan oo macaamiisha ka mid ah ey dhibaato ka heeysato luuqadda kolka ey adeegeneyaan.
Måns Hemmingsson ayaa sheegay in xaaladdu ay markiiba ka sii cakirantay, iyadoona muddo iminka toddobaad laga joogo ey ku sugan tahay Rawa Tahahd oo horay uga soo shaqeeyn jirtay ururka Laankhayrta Cas albaabka dukaanka, diyaarna u tahay sidii ey uga jawaabi lahayd su’aalaha ey qabaan macaamiisha, khaasatan kuwooda ku hadla luuqadda carabiga iyo sidoo kale luuqadda ingiriisiga.
Su’aalaha ay ka jawaabto ayun baan ku ekeyn halka cunnadu ey ka taalo khaanadaha dukaanka iyo qiimahooda oo keliya, sida ay sheegtay mar ay u warrameeysay laanta idaacadda ee P4 Västmanland.
- Macaamiisha qaxootiga ayaa sidoo kale qaba su’aalo kale oo fara badan oo aaney caadeey-san iney ka jawaabaan shaqaalaha ka howl-gala dukaanka cunnada, su’aalahaasina oo ey ka mid yihiin ”habkee ayaan dhakhtarka ku tegi karaa? ama sideen lacag u badalan karaa?”. Maantadan waxaa la i weeydiiyay su’aasha ah xaggeen ka iib-san karaa kaarka basaska, tusaale ahaan.
Sida xaaladdu iminka tahay muu garan karo Måns Hemmingsson muddada uu dukaanku u baahan baahan doono taageerada Rawa Tahahds.
Hase yeeshee uu aad uga niyad jab-san yahay weji gabaxii uu kala kulmay howl-wadeennada degmada.
Illaa aan caawinaad weydiisaney ururka laankheeyrta Cas, ma aaney suurta-gelin inaan tarjubaan helno, sida uu sheegay.
- Howlo ayaa halka na hor-yaala, hase yeeshee eynaan ka helin wax fal-celin ah howl-wadeennada degmada sidii aannu u gudan laheyn hoowlahayaga. Nasiib wanaag waan ku guuleeysanney aakhirkii inaan helo tarjume.
Isha/ P4 Västmanland